Bible Mu Nsɛm Nea Enti a Ɛsɛ sɛ Dawid Guan - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cinyanja Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Ewe Faroese Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Nicaraguan Sign Language Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen (Cyrillic) Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Ukrainian Umbundu Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
DAWID kum Goliat akyi no, Israel safohene Abner de no baa Saul anim. Saul ani gyee Dawid ho. Ɔyɛɛ no ne dɔm mu asafohene no biako, na ɔmaa ɔbɛtraa ahemfie.
Akyiri yi, bere a asraafo no fi wɔne Filistifo akodi no resan aba no, mmea no too dwom sɛ: ‘Saul akum mpempem, nanso Dawid akum ɔpedudu.’ Eyi maa Saul ani beree, efisɛ wɔhyɛɛ Dawid anuonyam sen Saul. Nanso Saul ba Yonatan ani ammere. Na ɔdɔ Dawid kɛse, na na Dawid nso dɔ Yonatan pii. Enti wɔn baanu nyinaa hyɛɛ wɔn ho bɔ sɛ wɔbɛyɛ nnamfo bere nyinaa.
Ná Dawid yɛ obi a otumi bɔ sanku yiye, na na Saul pɛ nnwom a ɔbɔ no. Nanso da koro, ahoɔyaw maa Saul yɛɛ biribi a enye koraa. Bere a Dawid rebɔ sanku no, Saul faa ne peaw towee, na ɔkae sɛ: ‘Mɛbɔ Dawid afam fasu no ho!’ Nanso Dawid dan ne ho, na peaw no anka no. Akyiri yi Saul tow peaw no bio a anka Dawid. Enti Dawid hui sɛ ɛsɛ sɛ ɔhwɛ yiye.
Wokae ɛbɔ a Saul hyɛe no? Ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔde ne babea bɛma ɔbarima a obekum Goliat no aware. Akyiri yi Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ ɔde ne babea Mikal bɛma no, nanso ɛsɛ sɛ okum Filistifo 100 ansa. Hwɛ asɛm! Ná Saul ani da so sɛ Filistifo no bekum Dawid. Nanso wɔankum no, enti Saul de ne babea maa Dawid sɛ ne yere.
Da koro Saul ka kyerɛɛ Yonatan ne ne nkoa nyinaa sɛ ɔpɛ sɛ okum Dawid. Nanso Yonatan ka kyerɛɛ n’agya sɛ: ‘Nyɛ Dawid bɔne. Ɔnyɛɛ wo bɔne da. Mmom no, biribiara a wayɛ no yɛ nea ɔde boa wo. Ɔde ne nkwa too ne nsam kokum Goliat, na bere a wuhui no, w’ani gyei.’
Saul tiee ne ba no, na ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔrenyɛ Dawid bɔne. Wɔsan de Dawid bae, na ɔkɔɔ so som Saul wɔ ne fie hɔ sɛ kan no ara. Nanso, da koro, bere a Dawid rebɔ nnwom no, Saul san too ne peaw no bio sɛ ɔde rebɔ Dawid. Dawid twee ne ho na peaw no kɔwɔɔ fasu no mu. Eyi to so abiɛsa! Afei Dawid hui sɛ ɛsɛ sɛ oguan!
Saa anadwo no Dawid kɔɔ n’ankasa ne fie. Nanso Saul somaa nnipa sɛ wonkokum no. Ná Mikal nim nea n’agya abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ. Enti ɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ: ‘Sɛ woanguan anadwo yi a wobekum wo ɔkyena.’ Anadwo no Mikal boaa Dawid ma ɔfaa mfɛnsere mu guanee. Bɛyɛ mfe ason no na ɛsɛ sɛ Dawid de ne ho sie sɛnea ɛbɛyɛ a Saul nhu no.
Ɛyɛɛ dɛn na Saul ani beree Dawid, nanso ɔkwan bɛn so na ɛsono Saul ba Yonatan?
Ɛda bi, bere a Dawid rebɔ sanku ama Saul no, dɛn na esii?
Saul kaa sɛ Dawid nyɛ dɛn ansa na ɔde ne ba Mikal ama no aware, na adɛn nti na Saul kaa saa?
Sɛnea wuhu wɔ mfonini no mu no, dɛn na esii mprɛnsa bere a Dawid rebɔ sanku ama Saul no?
Dɛn na Mikal yɛe de bɔɔ Dawid nkwa ho ban, na na ɛsɛ sɛ Dawid yɛ dɛn mfe ason?
Kenkan 1 Samuel 18:1-30.
Ɔkwan bɛn so na ɔdɔ kɛse a na ɛwɔ Dawid ne Yonatan ntam no ma yehu ɔdɔ a ɛwɔ “nguan foforo” no ne “kuw ketewa” no ntam? (1 Sam. 18:1; Yoh. 10:16; Luka 12:32; Sak. 8:23)
Ɔkwan bɛn so na 1 Samuel 18:4 da Yonatan ahobrɛase a ɛda nsow ma nea Yehowa ayi no sɛ ɔmmɛyɛ ɔhene no adi, ɛmfa ho nokwasɛm a ɛyɛ sɛ ɔno na anka ɛsɛ sɛ odi Saul ade no?
Ɔkwan bɛn so na nea Saul yɛe no ma yehu sɛ nitan betumi ama yɛayɛ bɔne a ɛsõ, na kɔkɔbɔ bɛn na ɛde ma yɛn? (1 Sam. 18:7-9, 25; Yak. 3:14-16)
Kenkan 1 Samuel 19:1-17.
Ɔkwan bɛn so na Yonatan de ɔno ara nso kra too ne nsam bere a ɔkaa nsɛm a ɛwɔ 1 Samuel 19:4, 5 no? (1 Sam. 19:1, 6)